Qajojiin galmee akkaataa dhangeessuu, saxaatoo, gabateewwan, wanta, fi odeeffanoo ka biroo gooree warra of keessaa qabuudha. Qajojiin galmeewwan kabiroo uumuudhaaf akka bu'uuraatti fayyada. Fakkeenyaaf, galmee tokko keessaa, keewwataa fi akkaataalee arfii qindeessuu, galmicha akka qajojiitti olkaa'uu, kana booda qajojiicha akkaataa tokkichaan, akka galmee haaraa uumuuf itti fayyadamuu nidandeessa.
Yoo ifteessitee malee, galmeen barruu LibreOffice haaraan hundinuu qajojii durtii irratt hundaa'u.
LibreOfficenii, qajojiiwwan durmurtaawaa hedduu warra ittiin akaakuu adda addaa ykn galmeewwan barruu kunis, xalayyoota daldala fayyadamuu dandeessuudha.
Glmee Biroo Irraa Haalata Fayyadamuu
Title is: Qajojiiwwanii fi Akkaataalee